Last updated: May. 23 2019 | 2 min akhri
Lahaanshaha wingman a aaminsantahay oo khabiir by dhinaca go'aan ka gaari kara in aad la dumar ah oo qurux ama Solo ka tagi doono. Hoos, waxaan ku ururiyey xeerarka wanaagsan ee isagoo wingman kama dambaysta ah.
Rule #1: Kii ugu horeeyay ee soo dhawaado, dooranayo
Daacadii, waxa ay qaadataa geesinimada loo wajaho koox haween ah oo wada hadal ku dhufan ilaa ay sabab u tahay khatarta ah in hoos loo toogtay ama aan u garaacid off. Waxa kale oo ay qaadataa xirfad u dhawaadaan haweenka sida saxda ah. Sidaa xukunka hore: ku alla kii si guul ah soo dhawaado ugu horeysay, helo dooqa koowaad ee dumarka ah.
Rule #2: Daawee saaxiibadaa xaq u
Haweenka bartaan badan oo ka fiirsado gaar ah oo ku saabsan nin ay danaynayaan. Sharciga sida saaxiibadaa yihiin dadka aad taqaan coolest. Ma aha oo kaliya kalsoonida this radiate doonaa laakiin qof dumar ah oo dhakhso leh wuxuu noqon doonaa ka badan soo jiitay in aad. Baaraandegaya saaxiibadaa naag aad ogaan toban daqiiqo oo kaliya muujinaysaa in aad tahay ugu baahan.
Rule #3: Ixtiraam saamiga
Haddii saaxiibkaa waxa uu ka hadlayaa in tiro kisi ah ee haweenka, qaadan in sida qorista ah loo wajaho kooxda si ay u caawiyaan dheelli saamiga. Xusuusnow, haddii aad aakhirka waxaa garaacid off iyadoo hal gabar gaar ahaan, waxaad weli u baahan tahay in kooxda sii joogo. Leaving naag in ka tagi doono aad wingman nin ka yar taas oo macnaheedu yahay aad ayaa ku guuldareysatay. Waqtiga oo keliya inay caadi tahay in uu ka tago waa haddii saamiga waa xitaa. Sidaas waxaad ka heli labada mar keliya la dumarka qurux badan.
Rule #4: Ma oo waxaad ku tidhaahdaa waxa aad saaxiib awoodin in
Xeerkani waa mid muhiim u ah wingmen. Sug ilaa aad saaxiib aado musqusha ama tii cabniin ah oo ay ka hadlaan tayadiisa ugu fiican in hab aan toos. Waayo dhibcood bonus, ma si toos ah gabadha uu xiiseynayo hadli. La hadal aan saaxiibbadeeda iyo sugaan illaa ay ka celiya.
Si aad u caawiso fogaado saaxiibkaa isagoo sidoo kale si toos ah, marka waxa ay u muuqataa in habeenkii hoos baa loogu fuuli jiray soo jeedin mid cabniinka ee la soo dhaafay ama kor u socod si Masaarida ah inay ku raaxaystaan ​​aragtida la yaab leh.
Rule #5: Sharciga sida ciyaarta waa ka badan
Marka aad aragto in dhimbiil oo u dhexeeya saaxiibkaa iyo naagtii uu xiiso u, bilaabi simaha oo hadlaya sida ay hore u yihiin laba qof oo. Tani farsamo ee “Gababgabaynta”, ku yeelan doonaan raad la yaab leh sida dumarka saameeyo-isgaarsiinta sub badan by waxa dhab ahaan lagu sheegay.
Iyadoo guide arimahan in gacanta, aad hadda diyaar u yihiin in Habeen guul baxay magaalada.
Sidee Muhiim ma Sex?
3 Sababaha ma aha in aad aad u baabi On Date A First